Ahoana no fomba hialanao amin'ny mangana mandritra ny 24 ora? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Ahoana ny fanasitranana mangana haingana kokoa - ny fomba famahana
Ahoana ny fanasitranana mangana haingana kokoa - ny fomba famahana
Ahoana no fomba hialanao amin'ny mangana mandritra ny 24 ora?
Ireto manaraka ireto dia azo atao ao an-trano:
Fitsaboana ranomandry. Ahosotra gilasy avy hatranyrehefany ratra hampihenana ny fikorianan'ny rà manodidina ny faritra.
Hafanana. Azonao atao ny manisy hafanana hampisondrotra ny fivezivezena sy hampitombo ny fikorianan'ny rà.
Famintinana. Fonosy nytorotorofaritra amin'ny bandy elastika.
Krema vitamina K.
Adala aho ary maharitra marim-bolana ny mangana. (Jiro fakan-tsary) Inona no azoko atao mba hialana aminy na hisorohana azy? (Mitehaka ny vahiny) Tiako io fanontaniana io. Ka inona no mandeha manala ny mangana ary misoroka izany mihitsy aza? .And Doctor B, fantatro fa ianao no manam-pahaizana momba ny hoditra.
Fanontaniana voalohany ananako, marina ve fa toy ny ao amin'ilay lahatsoratra, mora mangana ny vehivavy noho ny lehilahy? Raha ny marina dia marina izany ary satria ny vehivavy matetika dia misy faritra somary mora mangana, toy ny sandry ambony, ny vodinay ary ny feny. Manify kokoa ny hoditsika ao. Manana tavy kely bebe kokoa isika ary noho izany dia hita ao amin'ireo faritra ireo ny tavy sy ny lalan-drà.
Iza amintsika no tsy manana an'izany? Nandeha nametraka tanky tsara tarehy aho ary avy eo nahazo izany mangana mahatsiravina tamin'ny sandriko ambony ary tsy vitanao. Ary tena misy izany; Tena olana izany. Mihamarika kokoa izany rehefa maivana ny hoditrao.
Ary ny olona sasany koa mora voan'ny genetika kokoa noho izy tsotra satria mihazakazaka ao amin'ny fianakaviana. Saingy manana sary mahafinaritra izahay izay mampiseho anao izay mitranga amin'ny hoditrao rehefa mandondona zavatra ianao. Izany no mitranga rehefa maratra ianao.
fomba mahasalama indrindra mahandro hena
Rehefa mijery ao anaty ny hoditra ianao, dia manapaka ny lalan-drà, ary mamoaka ireo sela mena mankamin'io sosona io eo ambanin'ny hoditra, ka mahatonga azy io tsy hiova. Ary miandry ny ho faty isika rehefa tonga ny mangana. Ka ho anao sy ny fanontanianao dia misy zavatra roa azonao atao.
Ny voalohany dia matetika isika no anontaniana momba ny arnica. Ka ny arnica dia zavatra azo raisina amin'ny endrika pellet, izay itondranao azy alohan'ny fomba iray. Ka raha fantatrao fa mila manao fandidiana ianao na manao zavatra mety hanorotoro anao, toy ny fampihetseham-batana mafy sy mahery, toy izany.
Heveriko fa hevitra tsara ny manao izany amin'ny alina alohan'ny hanombohana ireo plastika ary tsy fantatro raha hanome toro-hevitra izany ho anao aho mino ny rehetra. Tadidiko ny fotoana voalohany nahare momba an'i Arnicawas tamin'ny taona 80. Ny vehivavy iray izay natrehiko tarehy dia nisy mangana be, toy ny plum.
Nahita azy aho roa andro taty aoriana ary niteny hoe: wow, mbola tsy hitako izay nataonao? Hoy izy: 'Arnica;' Tsy mbola naheno an'izany aho. Ie. Tsy mampihomehy ve raha milaza aminao momba ny zavatra ny marary.
Eny tanteraka. Ny tiako holazaina, 20, 30 taona aty aoriana, mahazo arnica daholo ny tsirairay. Eny, azonao atao ny mandray ny pellets iray andro mialoha sy telo andro aorian'ilay fomba fanao, izay fepetra fisorohana tsara.
Heveriko fa ny gel arnica dia tena manampy be aorian'ny fomba fanao. Avy eo dia hanana sanda clearance ihany koa izy io. Tena milay izany.
Ity dia bromelain, ary avy amin'ny tahiry mananasy. Ary ity dia fanoherana mahery vaika. Azonao atao ny mividy azy io ho famenony.
Rehefa miteny amin'ny marary aho mba handray azy, dia 250 mg intelo isan'andro mandritra ny telo andro aorian'ny fomba fanao. Fomba tsara hanaparitahana ny fivontosana sy hanamaivanana ny mangana, mandehana haingana kokoa. Fa zavatra iray mety misy ifandraisany amin'ity mpijery ity ny fisorohana ny fihintsanan'ny ra.
Satria raha efa mora tohina ianao ary maka aspirinina ibuprofenor na naproxen be dia be toy ny menaka trondro sy fikarakarana vitamina dia misy zavatra miafina izay ananantsika rehetra indraindray amin'ny sakafontsika ary tsy tsikaritray fa mihombo ny rantsika ary manorotoro mora kokoa izao dia miaina amin'ny fotoana andehananao amin'ny Internet ianao ary dokambarotra ny zava-drehetra, ary misy fika ny zava-drehetra, sa tsy izany? ireo tena tsy mandeha. Ireo asa ireo. Eny, ireo no zavatra mandeha. (rehetra miresaka indray mandeha) Ireto no tiako indrindra izay hita manerana ny Internet ary tsy mandeha.
Ry zazalahy. Fanasana vava. Noho izany, ny fanasana vava dia iray izay hitantsika teo.
Tsy manao na inona na inona izany. Ka esory tsy ho ao an-tsainao fotsiny izany. Ary ny iray kosa dia hoditr'akondro.
Satria miresaka betsaka momba izany ny olona. tsy tokony hisy vokany io. Fantatrao tokoa fa ny fisorohana iray grama tena ilaina dia fanasitranana iray kilao.
Fa andao atao hoe manana hetsika lehibe ianao ary tena maratra mangana, na koa laser, toy ny laser fantsona VBeam, dia azo ampiasaina sy manaparitaka haingana kokoa ny mangana. Ary eo am-piandohana, rehefa mifanatrika voalohany ianareo, rehefa manana minitra iray hametrahana ranomandry eo amboniny. (Sonia) Ny lalan-dra tanteraka.
manamboatra bisikileta anao manokana
Raha azonao atao ny mitazona izany amin'ny gilasy hatrany am-boalohany, dia mety tsy ho ratsy izany. Eny, eny. Tsara izany.
Ahoana no fomba hialako amin'ny mangana mandritra ny 48 ora?
Asio famatrarana mangatsiaka mandritra ny 24 ka48 ora taorian'izayny ratra. Arakaraka ny maha haingana ny ranomandry anao no mampihena ny kely indrindra anaotorotoro. Aza atao fanorana nyhanorotorona manisy hafanana satria metymanaonyhanorotorolehibe kokoa.Aorian'ny 48 ora, kapoaka matevina mafanahoampiasaina hanampiana hanapotika nyhanorotoromitokana ary hampirisihana ny fivoahan'ny lymphatic.17 des 2020
Sarah Tonks mpanao hatsaran-tarehy aho, andriamanitro, ireo no zanako lahy, ny anarako dia Dr. Sarah Tonks, mpanao hatsaran-tarehy any London aho, fantatrao hoe ohatrinona ny mailaka azoko isan-kerinandro amin'ireo marary voan'ny tsindrona toy ny botox na filler na zavatra hafa. toy izany, ary toy ny natahotra tanteraka izy ireo satria manana Abruiseyah Mazava ho azy, eny eny, misy foana io resadresaka ataonay io, mety maratra ianao, atahorana hitranga izany raha mampiditra fanjaitra amin'ny tavanao ianao. , tsy fantatrao hoe aiza daholo ny lalan-dra na ny kely, ka ny loza mety hitranga dia mila miomana amin'ity tranga ity ianao ka inona no hataontsika raha misy mangana ny olona iray ary mety ho hitanao ny fiaviany, toy ny hoe manana ianao vita ny fitsaboana dia ho hitanao fotsiny fa eo ambanin'ny endrika hoditra izy io na koa miseho toa ny roa aza izy? sa telo andro aty aoriana dia misy fanantenana ho an'ireo olona ireo? Voalohany, milaza aho fa aza mikoropaka satria ara-dalàna ny manindrona ny tenanao amin'ny ane Noble, mety maratra koa ianao, koa aza gaga raha misy mangana aorian'ny fitsaboana, ary aza ataovy ny lesoka, fantatrao, fony aho nanao an'io-sy-izany telo taona lasa izay? Aza mahazo mangana satria fantatrao ny atao hoe anatomia, tsy fantatrao hoe taiza ary ary, nisy ny vintana tamin'ny fotoana farany nitondrany anao, angamba tsy nahy ianao tamin'ity indray mitoraka ity ka tsy voatery ho famantarana ny fahaiza-manao izany. ny tsindrona, na maratra ianao na tsia raha toa ianao ka toa mpivaro-kena avy any amin'ny blackwall ary toy ny hoe mahay mikapa sy manamboatra ianao ary fantatrao fa manao azy mazava ho azy, eny mety ho maratra sy mamontsina ianao aorian'ny mitranga izany fa fantatrao hoe rahoviana ianao no manao? Misy olona manindrona azy ireo, hitanao fa mitandrina izy ireo.
Fantatr'izy ireo fa mampiasa fanjaitra mahitsy izy ireo ary fantatrao fa nanaja ny lamba izy ireo ary avy eo nahazo mangana ianao avy eo miala tsiny fa toa ratsy fotsiny, iray amin'izy ireo ihany ireo zavatra ireo toy ny lava ve ny mangana? Miankina aminao izany, ka ohatra raha salama sy salama ianao ary tanora kely, eo amin'ny 10 andro eo ho eo, raha zavatra manan-danja io dia ho hitanao ny fandalovany amin'ilay tsingerina mahazatra ahazoana azy maizina toy ny loko volomparasy, mety mitovy amin'ny loko volomparasy mainty ary ho hitanao fa somary maintso izy avy eo mavo ary avy eo malazo, ka inona no azonao atao mba hanandramana ilay maintso volomparasy - maintso mavo mavo hanafainganana Handeha hamakivaky ireo zavatra tiako hatao ao an-trano aho aorian'izay, voalohany? etsy ambony ny adihevitra arnica vs bromelain taloha fantatro fa betsaka ny olona toa an'i arnica fa tovovavy bromelain aho, ny antony dia satria misy porofo marobe momba izany. Tamin'ny fanadihadiana natao tato ho ato dia hitan'izy ireo fa ny dimy amin'ny fanadihadiana fito dia nahitana fiatraikany tsara tamin'ny bromelain ary 4 tamin'ny 13 no nahita vokatra tsara ho an'ny arnikaso ny isa dia tsara kokoa ho an'ny bromelain izay am-bava fa tsy lohahevitra, ka izay no te-hampiasa azy io dia bromelain voajanahary avo lenta kokoa, izy io dia anzima mananasy, dia tena tsara ihany koa hanamaivanana ny puffiness. Raha mahatsapa ho kely tampoka ianao aorian'ny fitsaboana anao, dia diniho indray, dia mety ho maratra na roa.
Manomboha manery ny bromelain, tsy maharary anao izany ary maka iray amin'ireo intelo isan'andro ianao dia fitsaboana iray, raha tianao ny hitondra azy eo akaikin'i arnica dia vahiniko tanteraka eo anoloana aho heveriko fa toa feo mahafinaritra izany ary ny antony itiavako an'ity dia ny hoe misy arnica sy somary aloe vera ao aminy, nefa koa misy hexadiene milay izay antiseptika ka tsara be raha fantatrao ny fotoana nahazoanao fitsaboana ary mila manotra kely ianao, fotsiny karazana fantatrao fa napetraka moramora amin'ny toerany ny vokatra, tsara ny manao azy miaraka aminy, tsy matetika izy ireo no ataoko miaraka aminy fa eny izay azo antoka fa zavatra mifototra amin'ny toeram-pitsaboana arko, azonao atao angamba ny mampiasa ao an-trano izany, fa rehefa mody ianao dia mety tsy mila mampiasa zavatra amin'ny corehexa-diene, io iray io na DermX mihoatra an'io crème vitamina K io, ka tsy porofon'ny crème vitamin K izany, fa eo dia fandinihana iray nijery ireo olona izay nanana fitsaboana tamin'ny laser ary raha mampiasa vitamina K lohahevitra na tsia dia mety hanafaingana anao p ny ratra aorian'ny fitsaboana tamin'ny laser, ary ny valiny dia eny, indraindray afaka nanao izany indray aho. Hampiasako izany any amin'ny toeram-pitsaboana, fa ity mety mety kokoa hampiasainao ao an-trano koa ity. Ity no chips mora indrindra azonao vidina mora amin'ny Internet Avy amin'ny orinasa iray antsoina hoe Oregon International Last nahazo mangana avy tamin'ny MD cream Tsara tarehy ity betsaka ny zavatra voalaza ao amin'ilay marika, noho izany dia ho an'ny fisorohana sy fitsaboana maratra. Mahita mangana miforona ianao, iray monja no mankany amin'ny efi-tranonao tsy misy crème MD ary manosotra azy satria ao anaty ny glycerine dia mikatona kely ny capillary satria miteraka fivontosana kely, mila miandry ianao mandra-pahavitan'ny fitsaboana alohan'ny ny fampiasana azy, raha tsy izany tsy tena hitanao fa fantatrao izay ataonao ary io fivontosana io vokatry ny crème ihany no mahalala hoe inona izany? Saingy amin'ny ankapobeny dia mampiato ny fikorianan'ny rà ao amin'io faritra io, izay mampihena ny mangana, mba hahafahanao mampiasa azy na dia nisy mangana aza niryna raha tianao izany, fa raha ny marina dia angamba aho raha nahazo izany koa ao an-trano, mampiasa bromelain am-bava ary ny crème vitamina K heveriko ho fantatrao fa tena manana karazana totohondry roa heny ianao fa raha te ho manokana manokana amin'ireto lohahevitra mitovy amin'izany ianao, ny fihinanana pilina iray dia tsy ampy ho anao, tsy ampy izany, mila entinao mankany ny ambaratonga manaraka Inona no ataonao? Ary avy eo ry namako manana laser na IPL ianao, ka indraindray rehefa misy olona manatanteraka hetsika ary toy ny filazalazana tena manan-danja dia haverinay any amin'ny tobim-pitsaboana izy ireo ary hodiovina ara-dalàna raha toa ka Spot na volomparasy na manga mainty no andehananay avy eo. yag laser, raha toa ka toa tsara kokoa noho izany ny IPL mavo mavo, saingy afaka mampiasa laser KTP sy laser mandoko pulsa ianao - sendra azy ireo ihany ireo tao amin'ny tobim-pitsaboana, ary raha ny zavatra niainako, raha toa ianao ka mitsabo rehefa eo amin'ny loko volomparasy na mainty ny mangana, mety efa notapahinao roa ny antsasaky ny fanasitranana.
Ny vokatra ampiasaiko ao amin'ny toeram-pitsaboana ihany no resahiko. Raha manana toro-hevitra na tetika mahavariana ianao hanoritana ny tananao, azafady mba ampahafantaro ahy fa tsy niresaka momba ny olona mampiasa tongolo lay hoditra na vitamina E na anticoagulant na zavatra toy izany aho satria izao rehefa mihinana fanafody am-bava iray ianao hampitsaharana ny fivontonan-drà. Zava-dehibe ny tsy maintsy ataonao hatrany fa tsy hijanona fotsiny ianao satria hanao fitsaboana kosmetika, na dia mihinana warfarin aza ianao dia mety mbola hahazo tsindrona koa aza manahy ny amin'ny fandatsahan-dra kely ary avy eo tapaka lalan-dra, noho izany ry havana, raha manana torohevitra tsy nolazaiko ianao dia ampahafantaro ahy ato amin'ity fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany ity.
Regonna dia manomboka manao endri-javatra kely amin'ny faran'ireto lahatsoratra alarobia ireto izay manontany ahy fanontaniana ianao ary mandefa ny sarinao milaza raha tokony hanao an'io aho na izay oh fantatrao izay soso-kevitro na zavatra toa izany raha ianao te-ho anisan'ny iray amin'ireo lahatsoratra ary manontany ahy fanontaniana toy izany ary tsy mampaninona anao ny mitandrina kely dia andefaso mailaka tiako ho re aminao, okay ry zalahy, izany no amin'ity herinandro ho avy ity izay Hiresaka bebe kokoa momba izany aho ary mampanantena zato isan-jato amin'ny herinandro ho avy aho fa hivoaka ny lahatsoratra momba ny pena malaza sy ny asa hafa, hivoaka izany, mbola tsy nofantsihiko avokoa izany rehetra izany, okay, ka ho hitako ianao avy eo Tara
Inona no mahatonga ny mangana handeha haingana?
Asio ranomandry ny anaohanorotororehefa avy naratra ianao. Afaka mampihena ny haben'ny anao izanyhanorotoro, izay mety hamela azy hanasitranaHaingankaingana. Ny mari-pana mangatsiaka avy amin'ny fonosana gilasymanaomiadana miadana kokoa ny rà amin'io faritra io. Mety hampihena ny habetsaky ny rà izay mivoaka avy ao anaty sambo anao.1 sept 2020
Inona no sakafo manampy ny mangana haingana?
mihinanamahasalama, mahay mandanjalanjalevitraanisan'izany ireto manaraka iretoENTANA NOVOKARINAMEYVonjeomisoroka namanasitrana mangana:
Mananasy.mihinanamananasy vaovao dia manome fatra voajanahary amin'ny bromelain, izay metyVonjeonymaratra haingana kokoa.
Voankazo misy quercetin voajanahary.
ENTANA NOVOKARINAmiaraka amin'ny vitamin K.
Manampy ve ny fanorana?
tsyfanoranana manosotra ny ratra satria ianaoafakamanapaha lalan-dra bebe kokoa mandritra izany. Omeo fotoana ny tenanao mba hihena ny fanaintainana sy ny fivontosana ary asio ranomandry avy hatrany sy ilaina.23 mart 2020
Manampy amin'ny mangana ve i Vaseline?
Manasitrana fikikisana hoditra kely symangana-Jelly solikamitazona ny faritra mando, misoroka ny ratra tsy ho maina ary mamorona aretin-koditra ratsy tarehy. Izy io koa dia afaka mitazona ny fikikisana nahanorotoroavy miharatsy. Aza adino ny manadio ny faritra alohan'ny hametrahana ilay jelly.24 Jul Desambra 2019
Vaseline tsara ho an'ny mangana?
Moa ve ny akondro manampy ny ratra?
tsy manana ahiahy,manganamiaraka amin'nyAkondro
Akondrohamonjy azy indray! Fomba tsotramanampy mangana manganahaingana dia miaraka aakondropeel. Asio sombin-javatra fotsinyakondropeel, lafy nofo midina, mankamin'nyhanorotoro, sarony amin'ny bandy, ary miala mandritra ny alina. Ny maraina, nyhanorotorodia hihalefy kely.21 Mey 2019
maninona ny solomaso misy polarisedra no manao avana
Manampy amin'ny fanasitranana mangana ve ny akondro?
Araka ny Prevention, ny anzima ao amin'ny peel dia metyVonjeomihetsika mankany ambonin'ilay tsipika. Ny Indian Spot dia manoro hevitra ny fanosehana ny ao anaty aakondrovoaso ny ahanorotoro, na ny fandraketana azy amin'nyhanorotoromandritra ny alina, manalatorotoro.26 Mey 2017
Manampy ny mangana ve ny hoditr'akondro?
Araka ny Prevention, ny anzima ao amin'nypeeldiaVonjeomihetsika mankany ambonin'ilay tsipika. Ny Indian Spot dia manoro hevitra ny fanosehana ny ao anaty ahoditr'akondromihoatra ny ahanorotoro, na ny fandraketana azy amin'nyhanorotoromandritra ny alina, manalatorotoro.26 Mey 2017
Ahoana ny fanalana ny mangana haingana sy mandritra ny alina?
Raha misy faritra amin'ny vatanao naratra (mangana) dia miteraka fivontosana sy fanaintainana ireo sela simba. Raha mampihatra ranomandry amin'izany ianao, dia mampihena ny lalan-dra izany ary mijanona ny fivoahan'ny rà ao anaty mangana. Noho izany, ny ranomandry dia mampihena ny fivontosanao ary manasitrana haingana ny mangana.
Rahoviana no asiana fonosana ranomandry amin'ny mangana?
Mangana ianao rehefa vaky ny lalan-drà ifotony ary manampy amin'ny fanasitranana ny ranomandry amin'ny alàlan'ny fanenjehana ireo lalan-drà ireo. Makà fonosana gilasy na legioma misy legioma mangatsiaka fotsiny ary apetraho mandritra ny mangana. Ataovy azo antoka fa fonosina amin'ny lamba ny kitapony raha tsy apetaka amin'ny hoditrao. Ampiharo mandritra ny 20 minitra aorian'ny adiny rehetra mandritra ny 48 ora voalohany. 2.
Fa maninona no maharitra ela vao sitrana ny mangana?
Mitranga ny mangana rehefa misy zavatra mamely ny vatanao amin'ny hery be ka manapotika ireo lalan-dra ao ambanin'ny hoditra. Elaela vao hanjavona ny mangana, izay mety hahasosotra indrindra, indrindra rehefa tsy maintsy mandeha mankaiza ianao ary tsy te hiseho ny mangana. Ny zavatra tsara dia afaka manasitrana ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana fanafody tsotra ao an-trano.